China Thrust Ball Bearing ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ | Lixin
Thrust ball bearing ကိုထိုင်ခုံလျှော်စက်၊ ရိုးခေါင်းလျှော်စက်နှင့်သံမဏိဘောလုံးလှောင်အိမ်တို့ဖြင့်အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်ခွဲခြားထားသောအသီးအနှံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရိုးတံနှင့်ထိုင်ခုံလျှော်စက်သည်လှောင်အိမ်နှင့်သံမဏိဘောလုံး၏အစိတ်အပိုင်းမှခွဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည် axial load ကိုခံနိုင်သော်လည်း radial load မဟုတ်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုအရ thrust ball bearing ကို single-direction thrust ball bearing နှင့် double-direction thrust ball bearing ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Single-direction thrust ball bearings နှစ်ခုသည်အပြေးပြိုင်ပွဲများနှင့်လှောင်အိမ်အတွင်းလမ်းညွှန်ထားသောဘောလုံးများပါ ၀ င်သည်။ အဝတ်လျှော်စက်များတွင်ပြားသောထိုင်ခုံမျက်နှာပြင်များရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဘောလုံးအားလုံးကိုအညီအမျှတင်နိုင်ရန်၎င်းတို့ကိုထောက်ပံ့ရမည်။ ဝက်ဝံများသည် ဦး တည်ရာတစ်ခုတည်းကိုသာသယ်ဆောင်သည်။ သူတို့သည် radial forces များကိုသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပေ။
Double direction thrust ball bearings များအလယ်တွင်ရိုးတံလျှော်စက်နှင့်ပြားသောထိုင်ခုံမျက်နှာပြင်များပါ ၀ င်သောအစွပ်နှစ်ခုရှိသည်။ ရိုးတံလျှော်စက်နှစ်ဘက်စလုံးတွင်ပြိုင်ကားများရှိပြီးဂျာနယ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဝက်ဝံများသည်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုစလုံးတွင် axial forces များကိုသာသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
မှတ်စု:ဒါကငါတို့မှာ Taper roller bearings ရဲ့သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲ၊ မင်းလိုအပ်တာကိုရှာဖို့ပျက်ကွက်ရင်ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
၁။ TT၊ စပေါ်ငွေအဖြစ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းငွေပေးချေမှု၊ ငွေမပို့မီလက်ကျန်။
2. L/C မှာမြင်နိုင်သည်။ (ဘဏ်စွဲချက်မြင့်မားသည်၊ မထောက်ခံပါ၊ လက်ခံနိုင်သည်)
3. 100% Western Union ကိုကြိုတင်မှာပါ။ (အထူးသဖြင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်မှုအတွက် (သို့) ပမာဏအနည်းငယ်)
A.tube အထုပ် + အပြင်ဘက်စက္ဏူထူ + pallets
B.single သေတ္တာ + အပြင်ဘက်စက္ဏူထူ + pallets
C.tube အထုပ် + အလယ်သေတ္တာ + အပြင်ဘက်စက္ဏူထူ + pallets
သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ D. A.
၂။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏ပုံများကိုဂရု ပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာရှင်များထံသို့တင်ပြပြီးမှန်ကန်သောပြန်ကြားချက်များပေးပါ။
၃။ ဖောက်သည်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အသက်သာဆုံးပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်ရှာသည်။
၅။ After-sales service သည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်မှုကိုအလေးအနက်စဉ်းစားသည်။
ယခင်: Stainless Steel Ball ဖြစ်သည်
Angular Contact Thrust Ball Bearing Ball ဖြစ်သည်
Thrust Ball Bearing ၅၁၁၀၃
Thrust Ball Bearing ၅၁၂၁၂
Thrust Ball Bearing Ball ဖြစ်သည်
Thrust Bearing များ၊
Brass ဘောလုံး, ကြေးနီဘောလုံးလေးများ, H62 ကြေးဝါဘောလုံး, Brass Ball Check Valve သည်, Pure Solid Copper Ball ဖြစ်သည်, H65 ကြေးဝါဘောလုံး,